Cherechedza kuti unhu hwakadini pane shongwe dzekutamba uye kukwira shongwe
Towers uye kukwira shongwe kuzotamba
Matayipi emapuranga ezviitiko zvose
Vana vaduku vatsvakurudzi vashoma uye vanotsvaga, avo vasingazivi zvakakwana kufarira kwavo uye kutamba kwavo. Nokuda kwechikonzero ichi, zvidhori zvinofanira kuva zvakasimba uye zvakasimba.
Vana vakashinga vanoda zvidzitiro zvakasimba
Kunyanya kana zhizha, iyo inokukoka kuti upedze nguva iri panze, iyo yakanaka, pfungwa dzevhidhiyo itsva dzinogona kubatsira. Vana vanoda kutamba kunze kunze kwebindu kana padare rekutamba chero panguva ipi zvayo.
Kudzivirirwa paunenge uchiridza
Tambai mumigwagwa inogona kuva yakanakisisa yekushanyira motokari nemakwikwi, asi munda wako unenge uri nzvimbo yakanakisa yekutamba.
Pano inogona kuva slide, kubhururuka uye bhandi rejecha. Apo baba vanotaura zvose zvakanaka kwazvo, anovaka nharaunda inonakidza yechitambo, uko makadziri maduku uye vafambisi vengarava vanogona kutambaira munyika yavo.
Matayipi emapuranga achiriko anozivikanwa zvikuru
Kuti ugare pamwe nemasvingo emusvingo kwekanguva, haisi chete inowanikwa mune dzimwe shanduro dzekuvaka, asiwo mune zvigadzirwa zvakasiyana-siyana. Asi huni hunove hwakakunda pano uye hunozivikanwa kwete chete nekuda kwaro hunofadza, asiwo nekuda kwehupenyu hwahwo hurefu.
Nokuda kweizvi zvinenge zvakadikanwa kuti shongwe inokwira iine huni yakakwirira uye basa rakanaka. Mhizha-vane zvipo vanogonawo kuvaka kubva pamapuranga uye matanda emakati pachavo. Ichokwadi kuti huni inofanira kuiswa sanded maererano nekuomeswa-kusungirwa kuitira kuti usapedza mivara inokuvadza uye mhinduro.
Iko kate yekutengeserana inowanikwa inotarisirwa zvakakodzera uye inoda kungosangana chete neunyanzvi uye iyo yakakodzera. Kana kuiswa kwegadziriro kusingakwanisi kuitwa pachako, vabereki vanofanira kubhadhara pfungwa kana mupi anopa basa rekuvaka muviri.
Pashure pemwaka wekunze mubindu, vana zvino zvakare uye vakawanda vakatevedzera mutambo muimba. Pano zvakare, zvigadzirwa zvematanda zvinoita basa rinokosha. Zvichida ndechokuti nyaya yekusimudzira iri kuwedzera kukosha, asiwo kuswedera kune zvakasikwa uye kugara kwenguva refu kunoita basa rinokosha mumatanda.
Purasitiki inosuruvarisa nguva dzose nekuda kwema plasticizers anokuvadza kana mavara asina mubvunzo mumusoro, kunyanya mumatayari evana vaduku. Kunyange zvakadaro, matoyi emapuranga haafaniri kutengwa pasina kushamiswa kusina mari, nokuti kunyange nyaya iyi inogona kunge ine zvigadzirwa zvinokuvadza uye pevhu. Unhu hwakanaka hunogona kuonekwa muvanoshambadziri vatengesi vemagetsi akave akazivikanwa kwemakore mazhinji.
Tenga matanda emasipi
Vana vezera rose vanoda matoyi emapuranga, kunyange kana izvozvo zvisingazununguki uye beeps. Shamba rekutengesa michero, mazai, ice uye mabhodhoro e soda akaitwa nematanda, igwagwa, mitambo yebhobho, jigsaw puzzles nemitambo yemitambo yose yakakwirira uye inonyengera, zvichipa vana vemakore ose kufara kutamba nayo.
Nezviyero izvi, kufara kwezvinhu izvi kunogona kupedzisira kupfuura kudarika chizvarwa.
Sei mitambo yakakosha zvakadaro? Kids hobby pasina nguva
Climbing Parks | Nguva yakasununguka nemitambo
Sei mitambo ichikosha zvevana?
Mitambo yemvura - inotamba mumvura
Nei vana vachifanira kutamba zvakawanda?
Kuchengetedza peji vana vari kutamba netambo
Rudo kune shamwari yakanakisisa
Nziyo dzevana kurara
Kuisa mapeji Mapeji ekuraira uye kuzvigadzira iwe pachako